Iphupha Malunga neNethi yokuLoba ▷ ➡ Discover kwi-Intanethi ▷ ▷️
Phupha ngoBomvu ukuloba. Ukutolikwa kwamaphupha kususela kwisithandi sobulumko esingumGrike, uArtemidore de Daldi ngo-200 AD, apho kwiincwadi zakhe aqonda khona ukuba ayingawo onke amaphupha awandulelayo. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi, siyacebisa ukuba ubonane eli nqaku ukufumana intsingiselo yamaphupha.
Njengomnatha wokuloba, ubizwa ngokuba sisakhiwo esithe tyaba ngohlobo lomnatha onemingxuma emxinwa, owona msebenzi uphambili kukubambisa iintlanzi. Kuxhomekeka kuhlobo lwentlanzi, nokuba yeyimackerel okanye ipike, ofuna ukuyibamba, ubungakanani be-mesh bunokwahluka kwaye ngamanye amaxesha bube bukhulu okanye buncinci. Xa ukhetha umnatha ofanelekileyo wokuloba, ubukhulu beentlanzi kubaluleke kakhulu.
Kodwa kutheni umnatha wokuloba ubonakala kuthi emaphupheni? Mhlawumbi sifuna ukubamba enye okanye ngaphezulu iintlanzi? Okanye ngaba sibona omnye umntu ezama ukwenza oku? Xa utolika elo phupha, ukongeza kwisimboli uqobo, iimeko ezihamba nazo kufuneka ziqwalaselwe ngokweenkcukacha. Kungenxa yokuba ezinye izikhombisi ekutolikeni zinokufunyanwa koku.
1 Uphawu lwephupha «ukuloba umnatha» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «umnatha wokuloba» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umnatha wokuloba» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukuloba umnatha» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokutsho kohlalutyo ngokubanzi lwamaphupha, uphawu lwephupha «ukuloba umnatha» ikwabonisa impumelelo okanye ixesha elinenzuzo. Umphuphi uya kuba nakho ukuphumeza iiprojekthi kunye nezicwangciso zakhe kwi el mundo ngempumelelo kwaye ufezekise iziphumo ezinqwenelekayo.
Umnatha wokhuseleko ephupheni unokuba kwi imeko edidayo okanye bonisa into ekungekho lula kangako ukubaleka kuyo. Kwakhona, le meko yamaphupha inokubonisa ukuba umntu makaphelise into ebomini.
Nabani na obona umnatha wokuphosa okanye umgibe wentlanzi ephupheni lakhe kufuneka atolike kwilizwe lokwenyani inhlanhla. Ukuba umphuphi ukhangela umnatha onjalo ngelixa elele, ithamsanqa liya kumkholisa. Ukuba umntu oleleyo ubanjiswe ngomnatha wokuloba ephupheni, unokufumana isibonakaliso sokuziphatha gwenxa kwindawo evuselela inkanuko.
Ukuba, ngokuchaseneyo, uzama ukubamba iintlanzi ngomgibe emanzini ephupheni lakho, ungathanda ukuphumelela kwicandelo lezesondo. Ukuba umlobi uphosa umnatha ngelixa elele kwaye ebambisa intlanzi kuwo, umntu ochaphazelekayo kufuneka azi ukuba ujongene nembangi kwaye uthetha Imeko enobunzima.
Uphawu lwephupha «umnatha wokuloba» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwembono yengqondo, isimboli somnatha wokuloba singabonisa ukuba umntu oleleyo ufuna a ubudlelwane obonelisayo. Oku kuzalisekiswa kufuneka kubandakanya iminqweno yesini yomphuphi.
Nangona kunjalo, ngephupha lakho, kuya kufuneka ngoku uqaphele ukuba eyona nto ifunekayo kwintsebenziswano ilungile. Ukuzazi. Kungenxa yokuba kuphela xa umphuphi eseluxolweni nesiqu sakhe, apho aya kuba nakho ukuzinikela ngokupheleleyo kwabanye abantu.
Ukuba umntu olele ulenga umnatha wokuloba phezu kombhede wakhe ephupheni lakhe, kuya kufuneka aboniswe ukuba kunjalo isini iziva inxilile, kodwa iphazamise kwangaxeshanye. Nabani na onxibe i-hairnet ngaphezulu kweenwele zakhe ephupheni lakhe uzama ukukhusela amandla abo obomi kwimpembelelo eyingozi yabanye abantu.
Uphawu lwephupha «umnatha wokuloba» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha, umnatha wokuloba unokuba ngu imvakalelo yokuqina okanye ifanekisela ukungazinzi okuviwa ngumphuphi.